Iinkampani ezininzi zibhengeza ngokwenyani indlela yazo yokushishina ngeempawu ezisezantsi. Ezi nkampani zibonakala ngathi azilifumani ifuthe elibi kakhulu olu hlobo lweempawu ezinokuba nalo. Uphononongo lwamva nje oluqhutywa nguGqirha James J. Kellaris weKholeji yaseLindner yaseBusin ...
Iimpawu ezikhokelwa ngaphandle azikho nje kwindlela esihamba ngayo, ziphakathi ekukhuthazeni ishishini lakho. Ukuba ungumnini wesitali esincinci, lelo lishishini lakho kwaye kubaluleke kakhulu ukuba ubambe ingqalelo yabathengi abanokubakho. Njengoko siphila kwiminyaka yale mihla, iintsuku han ...
Uphando lubonisa ukuba uphawu lwe-LED lwangaphandle ludlala indima ephambili kumthengi okanye kwisigqibo somthengi sokunxibelelana neshishini lakho. Phantse iipesenti ezingama-73 zabathengi bathi bangene kwivenkile okanye ishishini abangazange balityelele ngaphambili ngokusekwe kumqondiso walo. Uphawu lwakho lwangaphandle luhlala lubonakala ...